News - Production usoro nke igwe anaghị agba nchara sintered nyo mmewere
Production usoro nke igwe anaghị agba nchara sintered nyo mmewere
A na-akpọ ihe nzacha nke nchara nchara nchara nchara. Ihe nhicha ahụ na-eme ka ọkwa dị iche iche nke ụgbụ nke ọnya ụrọ site na ntanetị na nsị. Ihe ntinye ihe nchara nke igwe nchara nchara nchara bu nke eji eme ihe, nke kewara ya na uzo ise: nkpuchi nchebe, nkpuchi ihe nkpuchi, nkpuchi dispersion, oyi akwa na nkpuchi. Ihe nzacha ahụ nwere nhazi na nkwụsi ike ziri ezi, ike dị elu na nkwụsi ike, ma bụrụ ezigbo ihe nhicha maka oge nwere nnukwu ihe achọrọ maka ike mkpakọ na nhazi nzacha edo.
Isi ihe dị iche n'etiti igwe anaghị agba nchara sintered ntupu nyo mmewere na ndị ọzọ nyo ihe bụ ojiji nke a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke elu-nkenke ịgbado ọkụ usoro. The sintering nyo mmewere nke igwe anaghị agba nchara ntupu ka nke sintered nyo katrij mgbe ịcha na elu-nkenke ịgbado ọkụ. Ihe kacha mkpa nke sintering filter sintering bụ iji ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke teknụzụ ịgbado ọkụ dị elu. The sintering nyo katrij na ịgbado ọkụ site ịgbado ọkụ mgbe Rolling. A ga-enwerịrị gburugburu nke ịgbado ọkụ. Ekwesịrị idozi oghere ịgbado ọkụ ahụ mgbe ịgbado ọkụ ka ọ dịkwuo mma.
The nhọrọ nke ngwaọrụ, nkenke akara na ịgbado ọkụ usoro bụ atọ dị ezigbo mkpa ihe maka iyo mmewere nke igwe anaghị agba nchara sintering ntupu. Ngwaahịa ndị dị n'ahịa na-agwakọta ya na anya azụ, ihe ndị dị ala, obere ndochi na nzacha nzacha dị elu, na teknụzụ nhazi siri ike, nke na-eme ụfọdụ ngwaahịa na-enye ọnụ ala dị ala. Ndị ahịa kwesịrị ịmacha anya ha iji zere mfu karịrị uru ha na-akpata na ihe ndapụta nke ihe mberede mmepụta.
Isi ihe dị iche n'etiti igwe anaghị agba nchara sintering nyo mmewere na ndị ọzọ nyo ihe bụ ojiji nke a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke elu-nkenke ịgbado ọkụ usoro. Igwe anaghị agba nchara sintered metal mesh welded mgbe ọ na-agagharị. The roundness nke ịgbado ọkụ ga-hụrụ na ịgbado ọkụ ga-bibiri mgbe ịgbado ọkụ, ka na-eme ka dum anya mara mma na-akwadebe maka ọzọ n'ozuzu ịgbado ọkụ.
Mgbe ahụ, ndị sintering ntupu na-ịgbado ọkụ na ọgwụgwụ na-ekpuchi na nsọtụ abụọ site igwe anaghị agba nchara ịgbado ọkụ waya. N'oge ịgbado ọkụ usoro, sintering ntupu-apụghị-nsure iji gbochie obodo apa ọkụ na mmebi, n'ihi na nyo mmewere ghara ịrụ a nzacha ọrụ. Yabụ, a ghaghị ịrụ ọrụ nchebe argon gas maka gburugburu ịgbado ọkụ n'oge usoro ịgbado ọkụ. Usoro ịgbado ọkụ niile dị n'elu ga-enwerịrị ngwa ọrụ ịgbado ọkụ na ngwa ọrụ ịgbado ọkụ pụrụ iche, yana teknụzụ ịgbado ọkụ nke ndị ọrụ na-arụ esikwa ike. Bụrụ na nke ikuku leakage na mgbali nso mgbe ịgbado ọkụ afụ ule, niile nyo ọcha ga-kpụrụ.
Ihe nzacha mmiri, Igwe anaghị agba nchara ikuku filtration, Ọrụ gas gasị, Automotive Myọcha, Air Nzacha, Igwe anaghị agba nchara Myọcha,